‘कपल च्या’ले’ञ्ज’ भन्दै पतिको साथ फेसबुकमा फोटो राख्दा प्रेमिकाले गरिन् महिलाको धु’ला’ई गरेपछि… – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > ‘कपल च्या’ले’ञ्ज’ भन्दै पतिको साथ फेसबुकमा फोटो राख्दा प्रेमिकाले गरिन् महिलाको धु’ला’ई गरेपछि…
‘कपल च्या’ले’ञ्ज’ भन्दै पतिको साथ फेसबुकमा फोटो राख्दा प्रेमिकाले गरिन् महिलाको धु’ला’ई गरेपछि…
Praja September 26, 2020 मनोरञ्जन	0
काठमाण्डौं । अहिले ‘कपल च्या’ले’ञ्ज’ भन्दै श्रीमान् श्रीमतिको फेसबुकमा फोटो राख्ने क्रम बढेको छ । यसको सिको गर्दै मानिसहरु आफ्नो दम्पतिका फोटा सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेका छन् ।
भारतमा पनि एक् महिलाले ‘कपल च्या’ले’ञ्ज’ एक्सेप्टेड भन्दै आफ्नो पतिसँगको फोटो फेसबुकमा राखिन् । यसले नतिजा भने एकदमै नराम्रो दियो । ती महिला अहिले अस्पताल भर्ना भएकी छिन् ।
जब ती महिलाले आफ्नो श्रीमानसँगको फोटो सोशल मीडियामा राखिन् । पतिकी प्रेमिका र २ अन्य युवती घरभित्र पसे र ला’ठीले कु’टे र उनलाई घाइते बनाए । केही समयअघि घ टे को यो घटना सीसीटीभीमा पनि रेकर्ड भयो । ती घाइते महिला प्रहरी कार्यालय पनि गइन् तर कु’ट् ने लाई कुनै कारवाही भएन । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
महिलको नाम सुखजीत कौ र बताइएको छ । उनी स्थानीय खरार पुलिस स्टेशनमा उजुरी लिएर गएपनि पतिकी प्रेमिकालाई कुनै कारबाही नभएको गुनासो गरेकी छिन् । ती महिलाले बताइन् कि उनका पति गुरप्रीतले अर्को महिलासँग दोस्ती गरेका रहेछन् जुन उनलाई थाहा थिएन । उनी अहिले खरारमा भाडाको घरमा एक्लै बस्छिन् । फेसबुकमा फोटो राख्दा पतिको साथीले उनलाई कु’टे कोमा उनको चित्त दुखेको छ ।
महिलाले भनिन् कि पुलिसमा पेश गरिएको फुटेजले पतिको प्रेमिका दावी गर्ने अनिता र उनका २ साथीले कपाल ता’न्दै गरेको देखाउँदछ । अनिताले इँ’टा उ’ठा’इन् र उसलाई हा’ने पछि ती महिला घाइते भएकी थिइन् । पतिकी प्रेमिका र उसका साथीहरुले महिलाको धु’ला ई गरेर अ’लप भए । प्रहरीले यस घटनामा कारबाही गरिरहेको छैन । उनले भनिन्, ‘मैले उच्च अधिकारीहरूलाई पनि गुनासो गरेको छु, तर उजुरी लिईएको छैन ।’ सांकेतिक तस्वीर । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
ल हर्नुहाेस यी यस्ता अचम्मका उदाहरणिय जोडी, आए पहिलो पटक मिडियामा ( भिडियो सहित अन्तर्वाता )
हट नायिका सन्नी लियोनीले तताउने भइन नेपाली सिनेबजार, आइटम डान्स नै यस्तो! – भिडियो हेरेर मजा लिनुस्
गायिका ज्योति मगर पहिलो पटक मिडियामा, २ छोराको आमा बनेकि पो रहेछिन्! खुल्यो ६ वर्षदेखिको यस्तो सम्बन्ध (भिडियोसहित)